डाक्टर केसी टिचिङ अस्पतालको आइसियूमा – RaptiSandesh
Home / Feature Breaking news / डाक्टर केसी टिचिङ अस्पतालको आइसियूमा
डाक्टर केसी टिचिङ अस्पतालको आइसियूमा
काठमाडौं, ३ साउन । त्रिवि शिक्षण अस्पतालका प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीलाई बिहिबार साँझ त्रिवि शिक्षण अस्पताल काठमाडौं ल्याइएको छ। जुम्ला सदरमुकाम खलङ्गास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा विगत २० दिनदेखि अनशनरत डा. केसीलार्इ सेनाको हेलिकप्टरबाट काठमाडौं ल्याइएको हो।
सेनाको हेलिकप्टर टुँडिखेलमा अवतरण गरी डा केसीलाई सेनाकै एम्बुलेन्समा राखेर टिचिङ अस्पताल पुर्‍याइएको हो।
टिचिङ अस्पतालमा डा केसीलार्इ आइसियुको एक र दुर्इ नम्बरमा केसीलार्इ राखिएको छ ।
केसीले आफना मागहरु पुरा नभएसम्म अनसन नतोड्ने बताएका छन । डा. गोविन्द केसीले राखेका मागहरु यस प्रकारका छन ।
यी माग राख्दै डा.केसी २० दिनदेखि आमरण अनसनमा थिए
४०चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी न्यायिक जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहर्याएका पदाधिकारीहरुलाई आयोगको सिफारिश बमोजिम कारवाही गरियोस् । त्रिविले खोसेका अधिकारहरु आइओएममा फिर्ता गर्दै आइओएमलाई थप स्वायत्तता दिइयोस् ।
३ श्रावण २०७५, बिहीबार १४:१६
Previous: डा. केसीको समथैनमा तुलसीपुरमा प्रदर्शन
Next: जुम्लाबाट यसरी उडाइए थिए डा.केसी